Dagaal ka Dhacay Shabeelada Hoose.
Wararka naga soo gaaraya GOBOLKA SHABEELLADA HOOSE gaar ahaan TUULADA (FARXAANE) ee ka tirsan Degmada QORYOOLEY ayaa waxey sheegayaan in uu dagaal ku dhex marey labo Maleeshiyo oo ka tirsan Beelaha wada dega Gobolkaasi.
Dagaalkaasoo ka dhashey isku heysasho Dhul-Beereed gacan ku heyntiisa Dagaalkaan oo dhaliyey Dhimasho iyo Dhaawac ayaa wararku sheegayaan in ay ku dhinteen Todobo (7) Qofood oo Sadex ka mid ah ay ahaayeen (3) Dad Rayid ah, ku Dhawaad (9) Sagaal kalena waa ay ku Dhaawacmeen .
Ma ahan markii ugu horeysay ee iska hor-imaad ku saabsab dhulbeereedka uu ka dhaco .si kastaba ha ahaatee Arintaan ayaa ah mid in Muddo ahba soo jiitameysay Horeyna ay isugu dayeen in ay Xaliyaan Odayaal ka soo kala jeeda Maleeshiyada isku heysta Dhulbeereedkaas balse ma jirin xal wax ku Ool ah oo kasoo baxey isku daygaasi . Inkastoo ay jiraan dadaal loogu jiro sidii loo dhameyn lahaa Arintaan. Wararku waxey kaloo ay intaasi ku darayaan in hadda ay joogsadey Xabbadii oo ay ku kala dhex jiraan Waxgarad kasoo Gurmadey Magaalooyinka Qoryooleey iyo Buulo-mareer.